एलिक्स कल्बर्टसन/स्काइ न्यूज
सर्जिकल मास्क लगाए कोभिड-१९ को संक्रमण सर्ने सम्भावना उल्लेखनीय रूपमा घट्ने अनुसन्धाताले दाबी गरेका छन्।
हङकङको एउटा अनुसन्धान टोलीले जनाएअनुसार मास्क लगाउँदा हावामा रहेका कण वा श्वासप्रश्वासका छिटाबाट भाइरस सर्ने सम्भावना ७५ प्रतिशतले घटेको छ।
“कोरोनाभाइर महाव्याधिविरूद्ध मास्क निकै प्रभावकारी भएको निष्कर्षले देखाउँछ,” हङकङ विश्वविद्यालयका माइक्रोबायोलोजिस्ट डा. युएन क्वोक युङले भने। डा. युएनले सन् २००३ मा सार्स भाइरस पत्ता लगाउन सहयोग गरेका थिए। यस्तो निष्कर्ष दिने यो नै पहिलो अध्ययन भएको उनले बताए।
आफू मास्क प्रयोगको पक्षमा रहे पनि विश्व स्वास्थ्य संगठन लगायतका विश्वका नेताहरूले मास्कको प्रभावकारितामा प्रश्न उठाएकाले यो अध्ययन गरिएको उनले बताए। अध्ययनका लागि मुसाको प्रयोग गरिएको थियो।
एउटा समूहलाई कोभिड १९ बाट संक्रमित बनाइएको थियो। अर्को समूह स्वस्थ थियो। पङ्खाको हावालाई संक्रमिततिर फर्काइएको थियो। केहीलाई लक्षण देखिएको थिएन।
मुसा थुनिएको पिँजडामा कुनै मास्क नहुँदा दुई तिहाइ स्वस्थ मुसा एक साताभित्रै संक्रमित भएको अनुसन्धाताले बताए। तर संक्रमितको पिँजडामा मास्क राख्दा संक्रमण दर १५ प्रतिशतमा झरेको थियो। स्वस्थ मुसाको पिँजडामा मास्क राख्दा संक्रमण दर करिब ३५ प्रतिशतले घट्यो।
संक्रमित मुसाको शरीरमा भाइरस पनि कम देखिएको थियो। मास्कको सुरक्षा नपाएका मुसाको शरीरमा बढी भाइरस भएको अनुसन्धानमा देखिएको छ।
“विशेषगरी लक्षण देखिएका वा नदेखिएका मुसा वा व्यक्तिले मास्क लगाए अन्य व्यक्ति सुरक्षित हुने परीक्षणले प्रष्ट्याएको छ,” डा. युएनले भने,“संक्रमित व्यक्तिले सर्जिकल मास्क लगाए भाइरसको प्रसार ५० प्रतिशतले घट्नसक्छ। हालसम्म सुरक्षित र प्रभावकारी खोप उपलब्ध छैन। सामाजिक दूरी वा मास्क लगाउनु नै व्यावहारिक उपाय हो।”
संयुक्त अधिराज्य सरकारले पहिले मास्कले व्यक्तिको सुरक्षा नगर्ने बताएको थियो। तर अहिले सल्लाहमा संशोधन गरेको छ। दुई मिटरभन्दा टाढा रहन नसकिने साना पसल र सार्वजनिक यातायातमा मुख छोप्न सरकारले सुझाव दिएको छ। इटाली र जर्मनी लगायतका युरोपेली देशले पनि त्यस्तो स्थानमा मास्क लगाउनुपर्ने बताएको छ।
महाव्याधिको प्रारम्भमा हङकङमा मास्क किन्ने हतारो थियो। त्यहाँ सार्सको सम्झना ताजै छ। सार्सका कारण हङकङमा २९८ जनाको मृत्यु भयो। चीनमा त्योभन्दा धेरैले ज्यान गुमाए। तर हङकङमा हालसम्म कोभिड-१९ का कारण चार जनाको मात्रै ज्यान गएको छ।
हङकङ, जापान वा उत्तर कोरियामा मास्क नलगाइ हिँड्नु गैरजिम्मेवार मानिन्छ। अमेरिकाका थुप्रै राज्यले पनि घरबाहिर जाँदा मास्क लगाउने सुझाव दिएको छ।
Published Date: Saturday, 23rd May 2020 2:04:21 am